Fantatrao ve : Avy aiza ny rano sotroin'Antananarivo ?
mardi, 17 janvier 2017 07:34
Maro ireo paompin-drano tsy mandeha eto Antananarivo renivohitra. Mihamaloto mavomavo ihany koa ny rano.
Avy aiza ary ahoana ny fanadiovana azy ?
Ny ranon'i Mandroseza no diovin'ny Jirama.
Amin'ny ankapobeny amin'ny tany mahantra dia tombanana mandany rano 100 litatra isan'andro ny olona iray. Raha 1000 l ny any Frantsa ary 1200 l ny any Amerika.
Anisan'ny fitaovam-pandrefesana ny fahantrana ny fandaniana rano. Ny manankarena mampiasa wc, 20 litatra ny rano indray mivoaka. Piscine, zaridaina, fanasana fiara...
Raha 600 000 eo ny mponina eto Antananarivo renivohitra, ny lehibe no isaintsika, dia mahalany rano 60 000 000 litatra isan'andro izany ny mpanjifa. Izany hoe 60 000 m3.
Ka raha ny 1m avy aty ambony midina anaty rano no madio (turbidité) dia mila dobondrano 600m ny halavany ary 100m ny sakany.
Hitatsika amin'izany fa tsy ampy indray andro akory izany ny ranon'ny Mandroseza.
Izay no nanasiana barazy eo amin'ny reniranon'Ikopa hamatsy rano ao Mandroseza hanampy ny ao.
Ritra anefa izao Ikopa satria ny rano mamelona azy avy any ambony atsinanana dia ritra avokoa.
Mazava ho azy fa tsy aharitra andro vitsy dia tsy hisy rano ho sotroina Antananarivo raha tsy misy fepetra raisina.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny rano fisotro ?
Refesina isan'andro ny haavon'io rano tazana madio avy aty ambony io, turbidité.
Miankina amin'io refy io ny fatran'ny sograsy na La chaux afangaro amin'ilay rano ampakarina avy ao amin'ny dobobe. Ilaina io doboben'ny Mandroseza io mba ampitsika ambany ny fotaka sy ny loto.
Ampandalovina anaty fasika sy charbon io rano io, anala ny loto, fofona ary izay bibikely efa mety ho matiny ao.
Afangaro amin'ny La Chaux ilay rano, ka ahodina moramora anatin'ny dobo lehibe. Manantona io La chaux io ny loto sy ny fotaka ka mitsingevana ety ambony. Io no antsoina hoe floculant. Esorina amin'ny koveta io loto io.
Ampakarina amin'ny colone aingam-pandeha io rano io avy eo, ka ny loto mavesatra dia ho taraiky aty ambany fa ny madio tonga aloha eny ambony dia trohina aingana ary averina any ambany daholo indray ho diovina ny ambiny.
Vita izay dia asiana chlore (Cl), izay azo avy amin'ny sira (NaCl) nosarahina tamin'ny catalyse ilay rano hamono ny otrik'aretina samihafa. Io ilay fofona henotsika amin'ny robinet, mitovy amin'ilay fofona rano anaty piscine ireny. Na eau de javel hoy isika.
Averina atao analyse eo ny rano hijerena sao misy aretina, misy plomb, misy matière fécale na tay.
Ny institut pasteur tokony maka santionany na prélèvements isan'andro any amin'ny paompin'ny mpanjifa satria mety madio ny rano miala any Mandroseza nefa rehefa miakatra any amin'ny siniben-drano famatsiana na mety misy loto any anaty tuyau, na misy taimby arafesenina dia mitera-doza ny fisotroana azy.
Ireny no mahatonga ny lamba mivadika mena rehefa sasana. Misy diana arafesenina vokatry ny tuyau, mitondra ilay rano, efa antitra na misy vaky dia mampiditra loto mandritra ny fitaterana ny rano hatrany antokatrano amin'ny paompy.
Nahoana rehefa tapaka ny jiro dia tapaka ihany koa ny rano aorian'io ?
Rehefa voadio ny rano dia misy motera mandeha amin'ny herinaratra manosika io rano io hiakatra eny ambony toerana izay misy ny siniben-drano mamatsy ny faritra rehetra ety ambaniny. Ka raha tapaka ny jiro dia tsy mandeha koa io motera io, ka rehefa lany ny siniben-drano dia tapaka ny rano.
Viagra Sus Consecuencias [url=http://cialtobuy.com ]cialis price[/url] Proscar No Script
Stendra No Prior Script Buy Oristat
Viagra Barato Madrid cialis Nitrostat Without Prescription
samedi, 23 septembre 2017 11:11
Amoxicillin Dose For Acne [url=http://cialvia.com]cialis[/url] Precio Viagra Madrid
dimanche, 09 juillet 2017 10:10
Edinger-Westphal nucleus bremsstrahlung dermatofibrosis lenticularis disseminata cyanogenic glycoside agranulocytosis caroticotympanic canaliculi Cowper cyst [url="http://buypaxilonline.com"]paxil online[/url] hydrophil colloid fastidious bilobed flap ketole group elbow joint fenestrated bronchiolo-